हरेक दिन युट्युब २ सय करोड जनाले लगइन गर्छन् ! - Sagarmatha Online News Portal
हरेक दिन युट्युब २ सय करोड जनाले लगइन गर्छन् !
एजेन्सी । भिडियो शेयरिङ साइट युट्युब फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । अमेरिकी कम्पनी युट्युब आर्थिक घोटाला, अश्लिल तथा अनुचित सामग्रीका कारण विवादमा घेरिँदै जाँदा पनि हेरक दिन यसको प्रयोगकर्ता भने बढिरहेको एक मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
हरेक दिन २ सय करोडभन्दा बढी मानिसले युट्युब लगइन गर्ने गरेका छन् । गुगलका सिईओ सुन्दर पिचईले न्यूयोर्कमा भएको एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा प्रयोगकर्ताको संख्या १ सय ८० करोडबाट बढेर २ सय करोड पुगेको छ । गुगलको पेटेन्ट कम्पनी अल्फाबेटको शेयर मूल्यमा गिरावट भइरहेको समयमा युट्युबबारेको यो तथ्य बाहिर ल्याइएको छ । अल्फाबेट युट्युबको शेयर होल्डर कम्पनी हो । अल्फाबेटको शेयर मूल्यमा गिरावट आउन थालेपछि युट्युबको प्रयोगकर्तालाई देखाएर लगानीकर्ताहरुको ध्यान तान्न यसो गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो केही समययता युट्युबमा क्लिक गर्नेको संख्यामा कमी आएको कम्पनीका फाइनान्सियल चिफ अफिसरले बताएका छन् ।
युट्युबमा हुने क्लिक उसको आर्थिक संकलनको मूख्य स्रोत हो । गत वर्ष थुप्रै ठूला ब्राण्ड कम्पनीले युट्युबलाई विज्ञापन दिन बन्द गरेको थियो । युट्युबले गलत तथा आपत्तिजनक भिडियो सामग्रीका साथ आफ्नो विज्ञापनलाई स्थान दिएको भन्दै ठूला विज्ञापन कम्पनीदाताहरुले विज्ञापन दिन बन्द गरेका थिए । युट्युब प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जनमात्रै नभइ यसबाट विभिन्न जानकारी तथा शिक्षा पनि लिन सक्ने अवस्था रहेको युट्युबको दावी छ । यद्यपि, युट्युबले अझै पनि अनुचित भिडियोहरुलाई हटाउन कार्यमा संघर्ष गरिरहेको छ ।
Published On: २४ बैशाख २०७६, मंगलवार 345पटक हेरिएको